Mkpa mmanụ vs. N'ogbe AromaEasy N'ogbe di nkenke mkpa mmanu mmanu
Ihe na February 17, 2020 Nwere ike 30, 2020 by Aromaeasy
Mmanụ dị mkpa na mmanụ na-esi ísì ụtọ
Dika mmanu mmanu di nkpa abulitela ebe nile, ihe mgbagwoju anya banyere mmanu ndi di nkpa abawanyela. Karịsịa, ọtụtụ ndị na - ere ahịa ejighị n'aka ihe na - egosi ọdịiche dị n'etiti mmanụ dị mkpa na mmanụ na - esi ísì ụtọ. Ngwa ahịa abụọ ahụ nwere isi mara mma - ọ bụ na nke ahụ abụghị ihe dị mkpa?
Esemokwu ole na ole na ọdịiche dị n'etiti mmanụ ndị dị mkpa na mmanụ na-esi ísì ụtọ nwere ike iweta mkparịta ụka, arụmụka na esemokwu.
Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-agbagha okwu ndị a “mmanụ na-esi isi” na “mmanụ dị mkpa” n'ihi na ndị mmadụ na-ejikarị ha eme ihe na-enweghị ihe ọmụma.
Agbanyeghị, mmanụ dị mkpa na mmanụ na-esi ísì ụtọ dịgasị iche n'ọtụtụ ụzọ. Ọ bụ ezie na enwere ike iji ụdị mmanụ abụọ mgbe ụfọdụ maka otu nzube, ha dị iche iche dị iche iche, ọnụ ahịa ha, ma nwee ihe dị iche iche.
Gini bu mmanu di nkpa?
Ọ bụrụ na ị hụrụ isi anụ n'anya, mmanụ dị mkpa bụ ezigbo nhọrọ. A na-ewepụta ha site na mkpuru ahihia, ifuru, na osisi nke na - abụkarị ikuku site na uzuoku. Nke a na-agụnye ikpo ọkụ na mmiri ahụ ruo mgbe ewepụtara gas ma tinye gas ahụ na mmiri. Nke a bụ usoro dị nro iji hụ na ngwakọta ndị emetụtara agaghị agbaji.
Gịnị bụ mmanụ na-esi ísì ụtọ?
Mmanụ na-esi ísì ụtọ bụ sịntetik. Ha bụ ngwakọta nke kemịkal na-esi ísì ụtọ na ihe sitere n'okike dị ka mmanụ na extracts dị mkpa
Enwere ike mejuputa otu mmanu isi ihe 40-80, na uda ndi dara ada mgbe ufodu nwere onu ogugu 5.
Kedu ihe dị iche na mmanụ dị mkpa na mmanụ na-esi isi?
Otu esi emeputa ha
Ihe kacha egosi na ọdịiche dị n’etiti mmanụ dị mkpa na mmanụ na-esi ísì ụtọ bụ otu esi emepụta ha. A na - anakọta mmanụ dị mkpa site na usoro ntụgharị uche nke buru ibu nke na - anakọta mkpụrụ osisi, ifuru, ahịhịa na ihe ndị ọzọ sitere n'okike.
Mmanụ ndị dị mkpa bụ mmanụ sitere n'okike nke nwere “ihe dị mkpa”, ogige bara uru. Ha bụ mmiri mmiri (ma ọ bụ resins mgbe ụfọdụ), a na-adọpụ ma ọ bụ wepụta akụkụ dị iche iche nke ahịhịa. Akụkụ ndị ahụ nwere ike ịgụnye akwụkwọ, ifuru, ogbugbo, osisi, mgbọrọgwụ, agịga, mkpụrụ, agwa, peels, cones, osisi, ị ga, wdg.
Iji maa atụ, a na-amịpụta mmanụ oroma dị mkpa site na anụ nke mkpụrụ osisi, ebe amịpụtara neroli site na ifuru, na petitgrain site na akwụkwọ.
Nọmalị, mmanụ dị mkpa na-amịpụta site na distillation. A na - enweta mmanụ ụfọdụ dị mkpa n'agbanyeghị, site na ngosipụta ma ọ bụ mmịpụta mmịpụta. Thezọ wepụ mmanụ citrus na-ajụ oyi.
Ọ bụ ezie na a na-emepụta mmanụ na-esi ísì ụtọ site na mmiri mejupụtara nke nwere obere ihe ma ọ bụ enweghị ihe ndị sitere n'okike. Ihe a anaghị ekwu na ngwaahịa sịntetik enweghị uru ọ bara. Ihe bụ nsogbu bụ na ndị na-emepụta mmanụ na-esi ísì ụtọ ekwubeghị nke ihe mejupụtara ya. Ha anaghịkwa ekwupụta uru ọ bụla na-esi ísì ụtọ mmanụ nwere ike iweta.
Eke na eke
Olee otú mmanụ dị ezigbo mkpa dị? Julia Lawless, n'akwụkwọ ya, The Illustrated Encyclopedia of Essential Oils, na-ekwu, “Mgbe anyị na-egbu oroma, na-agagharị n'obere osisi ma ọ bụ na-agagharị n'etiti mkpịsị aka anyị, anyị niile maara isi ísì ahụ pụrụ iche. Mana kedu ihe ọ bụ na anyị nwere ike isi isi? N'ikwu ya n'ozuzu, ọ bụ mmanụ dị mkpa na-eme ka mmanụ na mmanụ na-esi ísì ụtọ ha na-esi ísì ụtọ na ụtọ ha, okooko osisi, na mkpụrụ ha.
Mgbe mmanụ na-esi isi nwere ihe ndị dị ka mmanụ plumeria, ọ bụ ngwaahịa na - eme ka mmapụta nke na - eso isi okpukpo nke plumeria, ọ bụghị mpụta ya.
Zọ ọzọ esi ewepụta mmanụ na - eweta ndị na - ewepụta mmanụ na - edepụta mmanụ sịntetik ha bụ site na ịgụnye ha aha dị egwu, dị ka lavender, okooko osisi cactus, na cloves, iji mee ka mmiri takọọ. Ọ bụ ezie na ha nwere ike mepụta isi ahụ n'ụzọ zuru oke, mmanụ na-esi ísì ụtọ anaghị enwekarị obere ihe ma ọ bụ na-enweghị ihe ọ bụla. Ya mere, ha enweghị uru mmanụ dị mkpa nwere ike inye.
Ikwesiri ịkpachara anya maka aha nke ifuru ifuru nke cherry ma ọ bụ freesia, isi mkpụrụ osisi nke ahịhịa, anyụ ma ọ bụ banana, na aha anaghị adị ka ụbọchị mmiri - ha na-eme mkpo.
Ike na aromatherapy
Ebumnuche bụ isi nke mmanụ dị mkpa iji nweta mmanụ dị mkpa bụ ị nweta uru anụ ahụ ma ọ bụ nke uche site na ha. Ma, oburu na izuta mmanu di nkpa site n’aka ndi n’enye ahia aha ha, ha gha eweputa gi nyocha GC, yabụ igha mara ihe kemikal ndi di n’ime ha. Agbanyeghị, na mmanụ na-esi ísì ụtọ, ị maghị ihe ị na-agbasa. Enwere ike ịnwe ụfọdụ ogige petrochemical na-enweghị uru ọgwụgwọ.
Mmanụ ndị dị mkpa na-agbanwe agbanwe ma, Ihe ndị mejupụtara kemịkal mmanụ dị mkpa n'otu ụdị nke osisi ahụ n'ihi oge, gburugburu na ọnọdụ na-eto eto, nke na-eme ka isi mmanụ dị mkpa dị iche n'etiti bat.
Mmanụ ísì ụtọ na-akwụtụghị nro n'ihi na a na-emepụta ya. N'ihi ya, mmanụ na-esi ísì ụtọ na-adị ogologo oge karịa mmanụ ndị dị mkpa
Kedu uru ahụike na ọdịmma karịa?
Mmanụ ndị dị mkpa nwere ọtụtụ ihe iji aromatherapy mee ka mgbu mgbu, mbipụta anụ ahụ, yana nsogbu anụ ahụ ndị ọzọ. Ihe dị mkpa mmanụ dị oke ọnụ ahịa bara oke uru bụ ojiji ya na akpụkpọ ntutu yana ịkpụ ntutu, yana ịkwa ụta, yana nrụgide na mbupu migraine. Enwere ike iwere mmanụ dị mkpa n'ime mmadụ ebe enwere ike ịnwe isi. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ete mmanụ dị mkpa mmanụ ma ọ bụ jiri ya na-asa ahụ. Ndị ọzọ nwere ike itinye ya n'ọrụ site na sistem,
Mmanụ na-esi ísì ụtọ enweghị ike ị nweta otu uru ahụ dị ka mmanụ dị mkpa, ebe emere ha maka iji imomi isi naanị.
Ihe ndị dị ndụ dị mgbagwoju anya, mmanụ ndị dị mkpa nwere ihe karịrị naanị ihe na-esi isi, ọ bụ ya mere na ha ji sie ike ịtụrụ. Ọ bụrụ na naanị anyị iche ihe ndị na-esi ísì ụtọ n’osisi, anyị agaghị enweta uru ọghọm ndị osisi ahụ nwere ike inye. Agbanyeghị, mmanụ na-esi ísì ụtọ na-ewusi isi nke ọtụtụ ngwaahịa ịchọ mma yana kandụl (ha na-enweta okpukpo kachasị mma na ihu igwe dị ọkụ).
Uru nke mmanụ dị mkpa
Nwere ike ịmepụta ngwakọta maka isi ihe na-agbanwe agbanwe.
Ntọala nke usoro ọgwụgwọ aromatherapy.
Cons nke mmanụ dị mkpa
Mmanụ ndị dị mkpa dịgasị iche na ọnụahịa, dabere na ụdị, oge. Oilsfọdụ mmanụ dị mkpa, dịka rose na sandalwood, dị oke ọnụ n'ihi usoro mmịpụta ndị bịara n'oge a.
Ọ na - ewe ihe dị iche iche, ọ na --eme puku kwuru puku ihe iji wee rụọ paụnd mmanụ dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, ịme paụnd lavender mmanụ dị mkpa chọrọ ihe dị ka paụnd 200 nke lavender.
Ọ bụrụ na mmanụ dị oke ọnụ adịghị ọnụ, o yikarịrị ka etinyere ya, usoro a na-ejikarị ụfọdụ ndị nrụpụta na-eji nweta oke uru ma na-eweta ihe “adịgboroja”. Dika ihe puru iche, mmanu mmanu di nkpa adighi adighi adi onu n'ihi udo nke mmuta.
Typesdị isi dị ole na ole.
Ọ bụghị osisi niile na -ewepụta mmanụ dị mkpa eji arụ ọrụ. Ihe atụ dị elu nke apụl na strawberries. Yabụ ọ bụrụ ịnwere ihe akpọrọ “strawberries mmanụ dị mkpa”, kpachara anya.
Nke a bụ n'ihi na ọtụtụ mmanụ dị mkpa na-esite na uzuoku ma ọ bụ mmiri distillation (ọ bụ ezie na citrus na-abụkarị ndị a na-enwe), usoro ndị ahụ enweghị ike wepụ mmanụ na apụl ma ọ bụ strawberries.
Mayfọdụ nwere ike jụọ ncha usoro ncha oyi, ụfọdụ enweghị ike iji ihe-ezumike, ekwesighi iji ndị ọzọ n'okpuru ọnọdụ ahụike ụfọdụ.
Uru nke isi mmanụ
Ofdị nnukwu ísì dị ukwuu, na-abata n’ihe karịrị narị abụọ
N’oge ufodu, emebere ha ka ha ku isi dika ihe eke (dika lavender, painiapulu, strawberries). N'ụfọdụ, emebere ha ka ha na-esi ísì dị ka ihe e kere eke ma ọ bụ echiche ọhụụ. (Dịka njupụta mmiri, ihe mega, ịtụnanya oyi).
Udiri mmanu di iche iche di nma karia mmanu ndi di nkpa n'ihi eziokwu na enwere ike ime urum. Ya mere ụdị ísì ya ejedebeghị na akụrụngwa nke na-ewepụta mmanụ dị mkpa. N'ezie, otutu isi dị ka mmanụ na-esi isi. Agaghị ahụta ihe atụ ndị dị na ụdị mmanụ dị mkpa gụnyere banana, ahịhịa, anyụ, apụl, na strawberries.
Stablekwụsi ike na ncha usoro ncha.
Oilsfọdụ mmanụ na - esi isi adịghị mma ma enwere ike iji ya mee ihe ncha, ngwaahịa ịsa ahụ na ihe ndị ọzọ.
Ọnụahịa dị ala.
Mmanụ na-esi ísì ụtọ, n'ụzọ na-enweghị isi, dị ọnụ ala karịa n'ihi ọnụ ala dị ala, mma ha ji arụ ọrụ, yana enweghị ihe achọrọ maka mmịpụta (ọ na-abụkarị usoro dị oke ọnụ).
Nsi nke mmanu isi
O bu ya mere mmanu di nkpa ji eji “akpụkpọ akpukpo aru” eme ihe mgbe obula, ndi n’enye ihe ndi n’esichu ha agha na nkwa na ngwa ahia ha “akpukpo aru”.
Somefọdụ nwere ike mee ngwa usoro nchapu nke ncha usoro ncha.
Enweghi ike na aromatherapy.
Jiri mmanu di nkpa
Enwere ike iji mmanụ dị mkpa mee kandụl yana ịme ncha. Ga-ahụ ha n’ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị ka sprays room, ude, salts, balms, oil massage, na ndị ọzọ. Ha bụkwa, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ ntọala nke omume mmerụ ahụ.
A na - ejikarị mmanu mmanu eme ihe na - eme ka aru mmadu nma n'ihi ihe ogwugwu ha. Na mgbakwunye, a na-eji mmanụ dị mkpa mee ihe ndị na-esi ísì ụtọ, ihe ndị dị n'ahụ, nsị anụ ahụ, ihe nhicha ụlọ ma dịkwa ka nri na ihe ọ drinksụ drinksụ.
Individualsfọdụ ndị mmadụ nwere ike iche maka nchekwa nke mmanụ dị mkpa - yana nke ọma. Mkpa mmanụ bụ kemịkalụ dị mma sitere n'okike. Ma otu nlekọta ahụ kwesịrị ka elebara anya ma ị na-eji ísì ụtọ ma ọ bụ mmanụ dị mkpa na ncha gị na kandụl. Chemicals bụ kemịkalụ ma emebere ya n'ụlọ nyocha, ma ọ bụ kee ya eke. Naanị maka na ihe dị kpamkpam apụtaghị na ọ dị nchebe mgbe niile ị ga-eji ya ma ọ bụ na ahụ gị. Yabụ jide n'aka na ị na-eji mmanụ dị mkpa nke ọma.
Na-eji mmanụ na-esi isi
A na-ejikarị mmanụ na-esi ísì ụtọ na-esi ísì ụtọ, soaps na anụ ahụ. Ọzọkwa, ndị na-eme atụmatụ na-ahọrọ ịhọrọ ha n'ihi ụdị isi ha dị iche iche.
Nke Kedu Nke Ka Mma?
Ha abuo nwere ezigbo uzo ha kwesiri, nye nti, yana otutu uru.
Agbanyeghị na ahụmihe abụọ na-eweta obi ụtọ, mmanụ dị mkpa nwere ike inye afọ ojuju miri emi ma nwee ike inyere ahụike gị niile aka. N’aka nke ọzọ, mmanụ na-esi ísì ụtọ nwere ike inye gị naanị obere oge ma bụrụkwa ihe na-emerụ ahụ ike gị. Ọ bụ ezie na a na-eji mmanụ isi ísì ụtọ n'ọtụtụ ubi ma, ha anaghị enye ọtụtụ uru mmanụ mmanụ dị mkpa nwere ike ịnye. Ka a sịkwa ihe mere mmanụ ndị dị mkpa ji abawanye ụba.
Ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ọ na-esiri anyị ike ịchọpụta ihe ezigbo mmanụ dị mkpa, ị ga-enweta uru dị na ịme ya mgbe ị jikọtara ngwaahịa ndị a ozugbo ka ị na-eme ọgwụ ndị aromatherapy. Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ihe dị mma n’anya, yabụ n’ezie, zụta mmanụ na-esi isi. Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ihe dị mma iji kwalite ndụ na ọdịmma gị, nhọrọ dị mma doro anya.